Abbaa 'baandii nama tokkoo' Artiist Laggasaa Abdii yoo yaadatamu - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Sirna awwaalchaa artisti Laggasaa Abdii
Sirni awwaalchaa artistii hangafaa Oromoo artist Laggasaa Abdii Finfinnee Bataskaana Kaatediraaliitti raawwateera.
Artistii beekamaa fi hangafaa Oromoo Laggasaa Abdii yeroo dheeraaf dhukkubsachaa turuun kaleessa ture umurii waggaa 80'n addunyaa kanarraa kan boqatan.
Artist Laggasaan jaalala tapha masiinqoon kan booji'me yeroo artistii beekamaa biraa Wasinuu Didoo jedhamu masiinqoon weellisu arguun akka tahe kanaan dura ibsaa tureera.
''Maasaan gamaa lafa hin baatuu, talbaa facaafata taati
Tokko du'ee tokko hin nyaatu wal gaggalaafata taati'' jechuun kan masiinqoon weellisaa ture hanga ammaattiyyuu fudhatama guddaa qaba.
Goodayyaa suuraa Namoota sirna awwaalchaa artist Laggasaa Abdii irratti argaman
Dabalataan bara 1970 keessa hiriyootaa isaa fi artistoota kanneen akka Dammisee Dastaa, Lammaa Gabrehiwoot, Ayyaalee Yimaanuu waliin tahuun dhuunfaadhaan 'garee muuziqaa Aadaa biyyaa' jedhamu tokko hundeessuun guddina aartii keessatti gumaacha olaanaa gochaa turaniiru.
Walumaa galatti artist Laggasaa Abdii dhiibbaa ulfaataa bara Afaan Oromoodhaan dubbachuun qaanii turee fi maqaan namootaa illee Afaan Oromoo irraa jijjirama ture keessa darbuun waggoota 60 oliif guddina aartii Oromoof gumaacha olaanaa taphateera.